बहुगुणी कागतीका यस्ता फाइदाहरु
–कागतीको रसमा मह मिसाएर सेवन गर्दा रुघाखोकी सन्चो हुन्छ । -कागतीको सेवनले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै मुटुको धड्कनलाई समेत सामान्य राख्न मद्दत गर्छ ।–पेटसम्बन्धी समस्याका लागि कागती अचुक औषधि हो । नियमित कागतीपानी खाएमा कब्जियत र पित् ...
आँगनकै जडीबुटी शरीरलाई उपयोगी, यी कुरामा ध्यान दिऔं
काठमाडौं - आयुर्वेदको विकास क्रममा लामो समय खर्चेको सिंहदरबार वैद्यखानाले कच्चा जडीबुटीको घरेलु रूपमा सही उपयोग गरेमा कोरोना लगायत जुनसुकै भाइरस विरुद्धको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मानव शरीरमा बढाउन सकिने जनाएको छ ।वैद्यखानाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा प्रब ...
सिस्नो किन खाने ? पढ्नुहोस् फाइदै फाइदा
काठमाडौं - हामीले आफ्नो भोजनका कहिले काँही सिस्नोलाई पनि सामेल गर्नुपर्छ । सिस्नोमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन, आइरन, फमिक एसिड लगाएत तत्वहरु पाइन्छन् । त्यसोत, सिस्नोको नियमित सेवनले किड्नीको समस्या, पिसाब पोल्ने, दम, बाथ रोग, डाइट ब्य ...
अदुवा हालेको चिया स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक
एजेन्सी - अदुवा चिया स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । अदुवा हालेको चिया स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।अदुवाको चिया पिउँदा पाचक क्रियामा सुधार आउनेछ । धेरै खाना खादा अदुवाले पचाउन सहायता गर्छ ।अदुवाको चियाले पेटको समस्या समेत कम हुन्छ । प ...
किन पिउने एलोभेरा जुस ? यस्ता छन् फाइदाहरु
काठमाडौं - घिउकुमारीका करिब दुई सय ५० प्रजातिमध्येको एलोभेरा एक हो । यसमा औषधीय गुण हुन्छ । एलोभेराको जुस प्रायःको रोजाइमा पर्ने गर्छ । यसको जुसको सेवनले हाम्रो शरीरमा विभिन्न फाइदा गर्छ ।–एलोभेरा (एक प्रकारको घिउकुमारी)मा ७५ प्रतिशत पानी, ७० प्रतिशत ...
नियमित दुध पिउनुका यस्ता फाइदा
काठमाडौं - प्राय हामीले गाई–भैँसीको दुध बिहान बेलुकाको खानासँग खाने चलन छ । कुनैपनि स्तनधारी प्राणीका लागि दुध अतिनै आवश्यक पदार्थ हो । अझ मानव जीवनका लागि त झनै महत्वपूर्ण पदार्थ हो । कुनै पनि शिशुका लागि जन्मेको ६ महिना सम्म उसको सम्पूर्ण खानेकुरा ...
संसद् अधिवेशन अन्त्यः के के भयो राष्ट्रियसभामा ?
काम गर्न सहज वातावारण नभएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले दिए राजीनामा
साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमानाका बन्द
४९ दिने शिशुको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, मृतकको संख्या ३१ पुग्यो
काठमाडौं उपत्यकामा थप ३१ जनामा कोरोना संक्रमण
नेपालमा थपिए ४७३ कोरोना संक्रमित